Masaabiir ayay ka billowday ganacsi, maantana waa milyan-dheer – Breaking News,Business, Kenya, Somalia, Politics, Lifestyle, Sports
Masaabiir ayay ka billowday ganacsi, maantana waa milyan-dheer
STN News March 7, 2018 Leave a comment
Waa haweenay Soomaali ah oo tusaale wanaagsan u ah guulaha ay nolosha ka gaari karaan dumarka Soomaaliyeed, magaceedu waa Aamino Xirsi Mooge, waxayna u warantay wariye Bushra Nuur iyo barnaamijka Taxanaha Dumarka ee BBC Somali
Mar la weeydiiyay qaabka ay ganacsiga ku biloowday waxa ay tiri “Ganacsi bay hooyadeed lahayd, waxaan ka billaabay dukaan masaabiirta iyo qalabka dhismaha lagu iibiyo, hormarka aan maanta gaaray, hadda ma uusan bilaabanin, wuxuu soo biloowday illaa maalinkii aan 9 sano jir ahaa”.
Laga soo billaabo maalintii ay 9 sano jir ahayd illaa maanta oo ay 64 jir tahay gadaal ma aysan eegin, waxayna isku guntaysay dun kasta si ay u gaarto heerka ugu sareeya, waxayna beenteysay fikir kasta oo laga qabay guulaha ay dumarka nolosha ka gaari karaan. ”Yaa yiri dumarka heer ma gaari karaan?”, ayay is weydiisay.
Waxay tiri “Warshadda sokorta waxaan ka sameeyay meel tuulo ah, tuulooyinka ayaana wax laga soo saari karaa, waxaanan ka fikirayaa in aan fikrado wanaagsan oo ganacsi la imaado Uganda, dadkeenana waxaan tusayaa in wax la qabsan karo, marka aad wax samaysid ayaad dadkana wax tari kartaa”.
Aamina Xirsi waxa ay aad uga mahad sheeganaysaa dowladda Uganda, waxaana xafiiskeeda u yaala sawir muujinaya iyada iyo madaxweynaha Uganda Yoweri Musavani, iyada oo arrintaas ka hadlaysana waxa ay tiri “Uganda waxa ay gacan igu siisay in ay dadka arkaan waxaan samayn karo, maanta aniga oo gabadh Soomaaliyeed ah haddii aan Soomaaliya joogi lahaa, la iima ogolaadeen waxa halkan iiga qabsoomay”.
Aamino dumarka Soomaaliyeed waxa ay u heysaa talo wax ku ool ah “Haddii aad doonaysid in isbadal dhoco waa in uu adiga kaa biloowmaa, gaar ahaan haddii aad tahay dumar”.
“Hooyaday xitaa waxa ay heshay abaalmarin ah dadka ugu wanaagsan ganacsiga ee gobolada waqooyi ee Kenya, dadkuna wax waa qabsan karaan” ayay tiri Aamino oo dangiig ugu fadhida kursi xafiiskeeda u dhexyaala.
← Dhalinyaro laga soo daayay xabsiyada Libya oo Muqdisho ku soo wajahan
Imaaraatka oo ‘faragalin’ ku haya Maraykanka →